Home Wararka Qiimaha Bistoladaha lagu kala iibsado Muqadisho oo cirka isku shareeray?
Qiimaha Bistoladaha lagu kala iibsado Muqadisho oo cirka isku shareeray?
Waxaa sadaxdii maalin ee u danbeeysay cirka isku shareeray qiimaha bistoladaha lagu kala iibsado magalaada Muqadishu. Sicir bararkaan ayaa lala xiriirinayaa dilalka qorsheeysan ee lagu dilayo qaar ka mida shaqaalaha shirkadaha ka shaqeeeyo magaalada Muqadishu.
Waxa magaalada Muqadishu ku soo kordhaya dilalka qorsheeysan ee lagu beegsanayo dadka ku dhaqan magaalada Muqadishu. madaama amaanka faraha ka baxay shacabka Muqadishu aya bilaabay in ay iyagu sugaan amaankooda si kasta oo ay ugu suuragalayso.
Previous articleWasiirka Maaliyadda Miyuusan garan Mas’uuliyadiisa Misa waa u Talagal inuu Beenalayaal ku Tilmaamo Guddiga Maaliyadda.
Next articleGolaha Wasiirada Maamulka Puntland oo war kasoo saaray safarka uu Madaxweynaha Somaliland ku tagi dono Gobolka Sool
Dowlada Burundi oo ka diiday AU in ay ciidankeeda kala baxdo...
Golaha Wasiirada Maamulka Koonfur Galbeed oo yeeshay kulan xasaasi ah